BookBook, arovy ny iPad-nao amin'ny fonony boky voalohany | Vaovao IPhone
Ny kojakoja ho an'ny iDevices dia kojakoja tena ilaina amin'ny fitaovantsika, manome fampiasa vaovao, manaingo azy ireo ary miaro azy ireo mihitsy aza. Ary efa hitantsika fa na ny Apple aza dia nanome lanja manokana ny kojakoja ao amin'ny Apple Store mba hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ireo ho famenon'ireo fitaovan'izy ireo.
Eo amin'ny tontolon'ny tranga iPad dia hitantsika ny zavatra rehetra: tranga namboarin'i Apple, fonony aoriana, fonony fitendry, fonony aoriana koa izay mandrakotra ny efijery… Hevitra tsy manam-petra natao ho an'ny fonony. Androany izahay dia mitondra tranga mahaliana anao izay hiaro ny iPad Air anao am-pitandremana, tranga iray izay hahatonga ny iPad-nao toa boky mahafinaritra, miresaka momba ny raharaha BookBook izahay.
BookBook dia sanganasan'ny orinasa South South and Izy io dia zavatra toa an'ireo banky / zaridaina alika kely izay efa nohafisantsika rehetra tao ambanin'ny fonon'ny boky sasany (Izay rakibolana anglisy / Espaniola izay nanafina ny tahirintsika rehetra tamin'ny naha zaza anay).
Vita amin'ny hoditra, Roambinifolo atsimo dia efa nanamboatra tranga BookBook hafa mitovy amin'izany ho an'ny iDevices (ho an'ny iPhone, iPad Mini ...) ary amin'izany dia hataon'izy ireo manana ny mari-pahaizana kalitao ny iPad Air. Hataon'izy ireo tsy ho tsikaritr'ireo mpangalatra fa manana iPad anao ianao satria amin'ny tranga BookBook dia tsy ho voamariky tanteraka.
Toy ny fonony hafa, ny BookBook dia mamela anao hihazona ny iPad Air amin'ny fihodinana 30 degre ho an'ny asa tsara. Ny atiny dia nilahatra tamina microfiber hiarovana ny hatsaran'ny iPad-nao, ary ny zoro dia hamafisina mba hiarovana azy amin'ny mety hianjera.
Raha misy tsy mety dia ny vidiny, 79,99 $ amin'ny alàlan'ny tranonkalany, saingy efa nilaza taminay izahay fa tsara ny miaro ny iPad anao, ary mendrika ny raharaha BookBook.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » BookBook, arovy ny iPad amin'ny fonony boky voalohany
Ahoana no hividianako azy?
ELIZABETH GOMEZ dia hoy izy:
Aiza no amarotany azy ireo? Sa manana fivarotana an-tserasera izy ireo?
Valio amin'i ELIZABETH GOMEZ
AnyAttach dia mifanaraka amin'ny iOS 7 (Cydia) izao